တောထဲတောင်ထဲမှာ အိမ်လေးဆောက်နေရင်း ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင် ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး သူ့ရဲ့ခံစားချက်ဆန္ဒအမှန်ကိုပြောပြလာတဲ့ လူရွှင်တော်တိုင်းကျော်(ဟား ၅ကောင်) – Cele Top Stars
May 30, 2021 By admin2Knowledge
ပရိသတ်ကြီးရေ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော် ကတော့ ပြည်သူချစ် သရုပ်ဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သလို ဟားငါးကောင်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ တိုင်းကျော်က လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ စတင်ပြုလုပ်တဲ့ အချိန်ကတည်းက လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်အားဖြည့်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း တိုင်းကျော်က ပြည်သူတွေအတွက် စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ဗီဒီယိုလေးတွေဖန်တီးရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာက တစ်ဆင့် မျှဝေပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
အမှန်တရား ဘက်ကနေ ရဲရဲဝင့်ဝင့်ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော် က အခုလည်း သူ့ရဲ့ Facebook Account မှာ ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ကို မျှဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တိုင်းကျော်က “အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်” ဆိုပြီး တောထဲတောင်ထဲကို ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံရိပ်တွေကို တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီး သူ့ရဲ့ရင်တွင်းဆန္ဒအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသနေတဲ့ တိုင်းကျော်က ရောက်ရာနေရာ ကနေ တာဝန်ကျေပွန်ကြောင်း ပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်… ။
ဓာတ်ပုံထဲ မှာတော့ တိုင်းကျော်က တောတွင်းတစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး နေထိုင်ဖို့အတွက် အိမ်ဆောက်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပြည်သူတွေကတော့ ရဲရင့်တဲ့စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိတဲ့ လူရွှင်တော် တိုင်းကျော်ကို လေးစားချီးကျူးနေကြပြီး ဘေးကင်းစေဖို့အတွက်လည်း ဆုတောင်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း တိုင်းကျော်က သူ့အတွက် စိုးရိမ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေကို စိတ်မပူဖို့ပြောပြီး သူ့အနေနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်း ပြောပြခဲ့သေး တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ။
ပရိသတျကွီးရေ လူရှငျတျော တိုငျးကြျော ကတော့ ပွညျသူခဈြ သရုပျဆောငျ တဈဦးဖွဈသလို ဟားငါးကောငျအဖှဲ့ရဲ့အဖှဲ့ဝငျတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ ။ တိုငျးကြျောက လူထုလှုပျရှားမှုတှေ စတငျပွုလုပျတဲ့ အခြိနျကတညျးက လမျးပျေါထှကျပွီး တဈတပျတဈအား ပါဝငျအားဖွညျ့ခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ ။ လကျရှိမှာဆိုရငျလညျး တိုငျးကြျောက ပွညျသူတှအေတှကျ စိတျခှနျအားဖွဈစမေယျ့ ဗီဒီယိုလေးတှဖေနျတီးရိုကျကူးပွီး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာက တဈဆငျ့ မြှဝပေေးနတော ဖွဈပါတယျ…။
အမှနျတရား ဘကျကနေ ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ရပျတညျခဲ့တဲ့ လူရှငျတျော တိုငျးကြျော က အခုလညျး သူ့ရဲ့ Facebook Account မှာ ဓာတျပုံတဈခြို့ကို မြှဝခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ တိုငျးကြျောက “အရေးတျောပုံအောငျရမညျ” ဆိုပွီး တောထဲတောငျထဲကို ရောကျရှိနတေဲ့ပုံရိပျတှကေို တငျထားတာ ဖွဈပါတယျ ။ လကျသုံးခြောငျးထောငျပွီး သူ့ရဲ့ရငျတှငျးဆန်ဒအမှနျကို ဖျောထုတျပွသနတေဲ့ တိုငျးကြျောက ရောကျရာနရော ကနေ တာဝနျကပြှေနျကွောငျး ပွသခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ… ။
ဓာတျပုံထဲ မှာတော့ တိုငျးကြျောက တောတှငျးတဈနရောကို ရောကျရှိနတောဖွဈပွီး နထေိုငျဖို့အတှကျ အိမျဆောကျနတောကို မွငျတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ ။ ပွညျသူတှကေတော့ ရဲရငျ့တဲ့စိတျဓာတျအပွညျ့ရှိတဲ့ လူရှငျတျော တိုငျးကြျောကို လေးစားခြီးကြူးနကွေပွီး ဘေးကငျးစဖေို့အတှကျလညျး ဆုတောငျးပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ ။ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကလညျး တိုငျးကြျောက သူ့အတှကျ စိုးရိမျနတေဲ့ ပရိသတျတှကေို စိတျမပူဖို့ပွောပွီး သူ့အနနေဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံကွောငျး ပွောပွခဲ့သေး တာပဲ ဖွဈပါတယျ…. ။